रोशीका युवालाई समटेर काम गर्नेछु | bethanchokkhabar.com
रोशीका युवालाई समटेर काम गर्नेछु
आइतबार, माघ २०, २०७५ | ७:२०:४० |
अजयबुद्ध लामा मिप्चन, युवा
भकुण्डेवेशी मुन्तिर एउटा युवाको आजभोली निक्कै चर्चा छ । २७ बर्षका अजयबुद्ध लामा सामाजिक काम भनेपछि हुरुक्कै हुनेरहेछन् । उनका हजुरबुबा स्वर्गिय प्रधानबुद्ध लामाको सामाजिक कामवाट प्रभावित भएका अजयबुद्ध लामा पछिल्लो समय सामाजिक काममै ध्यान दिने गरेका रहेछन् । साथीभाईहरुसँग बसेर कुराकानी गरेको समयमा समेत उनी सामाजिक जीवनकै कुरा गर्दछन् । सामाजिक काम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर साथीभाईसँग योजना बनाइरहेका हुन्छन् ।
रोशी क्षेत्रका युवाहरु सामाजिक जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्ने सन्देश बोकेर युवाहरुलाई सामाजिक जीवनमा कृयाशिल बनाउन सकिन्छ भनेर अजयबुद्ध हरेक दिन सामाजिक सेवाका काममै सकृय भएर लागि रहेका छन् । लामाले स्थानीय युवाहरुलाई स्वास्थ्य र रोजगारमूलक कार्यहरुमा जोड दिनको लागि केही महिना अघिमात्रै स्थानीय प्रहरी र युवाहरुबिच मैत्रीपुर्ण फुटवलको आयोजना गरेका थिए । साथै बजारलाई सफा बनाउन सफाई कार्यक्रमम सकृय सहभागिता जनाउन जोड दिएका थिए ।
‘हाम्रो हजुरबुबाको सपनामा गाँउमा बिजुली बल्यो, हाम्रो परिवारले सामाजिक काम गरिरहेको छ अब म युवालाई राम्रो हुने काम गर्छु’ अजयबुद्धले सारमा आफ्नो कुरा राखिहाले । उनलाई रोशीमा ठूलो फुटवल प्रतियोगिता गर्ने रहर रहेछ । उनले सबैसँगको सहकार्यमा रोशीमा ठूलो फुटवल प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेका रहेछन् । युवालाई प्रयोग नगरेर अवसर दिनु पर्ने बताउने अजयबुद्धसँग उनको जीवनमा आधारित रहेर गरिएको कुराकानीको अंश
0 युवा किन सामाजिक जीवनमा आधारित हुनुपर्छ ?
युवा देशको मेरुदण्ड हो । हामीले कितावमा पढेका छौ । तर युवालाई अवसर दिने बिषयमा धेरैले चासो दिनु भएको छैन । अरुले चासो दिएन भनेर युवा चुप लागेर बस्नु हुँदैन । मेरो हजुरबुबा स्वर्गिय प्रधानबुद्ध लामाले मेरो गाँउका लागि धेरै कुरा गर्नु भयो । विद्यालयमा शिक्षक बन्नु भयो, गाँउलाई उज्यालो बनाउन लद्यु जलविद्युत आयोजना सुरु गर्नु भयो । तर जीवनमा कहिल्यै हरेस खानु भएन ।
लद्यु विद्युतवाट अहिले मेरो गाँउका १ सय ७० घरमा बत्ती बलेको छ । त्यो देखेपछि सामाजिक जीवन सबैभन्दा ठूलो बिषय हो जस्तो लाग्छ । त्यसैले युवा साथीहरुसँग सामाजिक बिषयमा कुरा गर्छु । यो देश रुपान्तरण गर्ने युवाले हो । युवा सामाजिक भएन भने समाजनै चल्दैन ।
0 युवा उद्यमशिल किन हुनु पर्छ ?
युवा आफैमा चेतनशिल वर्ग हो । उसको काँधमा देश कता लिएर जाने भन्ने कुरा लुकेर बसेको हुन्छ । युवामा उद्यमशिलता भएन भने देश उधोगतिमा जान्छ । त्यसैले समाजको लागि देशको लागि र हामी युवाकै लागि पनि युवा उद्यमी बन्नु पर्छ । तर देशको वातावरण युवामैत्री छैन । युवाहरुको निम्ती सरकारले केही काम गर्न सकेको छैन । स्थानीय सरकारले पनि युवाहरुको आवश्यकतालाई पहिचान गर्न सकेको छैन ।
युवाहरु उद्यमी आफ्नो लगानीमा उद्योग स्थापना गर्नको लागि चाहिन्छ । स्वरोजगारीको सृजना गराउनमात्रै नभएर युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा जानवाट रोक्ने काम समेत उद्यमले गर्ने भएकाले युवाहरु निरन्तर उद्यमी बन्न आवश्यक रहेको छ ।
0 युवा खासमा के हुन ?
जोस, जागर अनि चलायमान गुणका कारण युवा एक महत्वपूर्ण र अभिन्न सामाजिक अंग हो । विद्रोह र विकाससँगै जोडिने यी यस्ता शक्ति हुन् जसलाई साँस्कृतिक रहनसहन, आर्थिक र राजनैतिक आधारमा यसलाई परिभाषित गरिएको छ ।
साधारणतया युवा अधिकारका कुरालाई अवसर, संरक्षण र सहभागिता संगै अनि युवा उत्प्रेरणालाई अधिकार, सम्मान र जिम्मेवारीका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । वेवास्ता गर्न सकिदैन किनकी यो एक राष्ट्रिय भविष्यको धरोहर हो ।
0 तपाईको सोच सामाजिक सोच कसरी आयो ?
हाम्रो गाँउमा भ्याकूरे खोला र रोशी खोलाको पानी त्यसै खेर गैरहेको थियो । मेरो हजुरबुबा प्रधानबुद्ध लामाले खेर गएको पानीवाट बिजुली निकाल्ने कुरा गर्दा सुरुमा कसैले पनि पत्याएन । तर २०६२ सालमा सुरु गरेको काम २०६४ सालमै गाँउमा बिजुली बल्यो । त्यहाँवाट देखिने तेमाल,थाक्ले,रोशीका कुनै पनि गाँउमा बत्ति नबलेको समयमा हाम्रो गाँउमा बिजुली बल्यो । मेरो हजुरबुबाले बत्ति बालेर देखाउनु भयो । गाँउमा उजाड रहेको वनमा बृक्षारोपण भयो । हजुरबुबाको सपना थियो । त्यो सपना पुरा गर्नको लागि समाजसेवामा अग्रसर बनेको हो ।
0 युवा किन खेलकुदमा अगाडी हुनुपर्छ ?
युवामा सबैकुरा चाहिन्छ । उसमा होस र जोस भएन भने उ युवा बन्ननै सक्दैन । खेलकुद युवालाई सन्तुलनमा राख्ने हतियार हो । त्यसैले शारिरीक स्वस्थताको लागि खेल चाहिन्छ । युवालाई एकतामा राख्नको लागि समेत खेलकुद नितान्त आवश्यक देखिन्छ , मैले पनि मेरो हजुरबुबाको नाममा रोशीमा फुटवल प्रतियोगिता आयोजनाको सोच बनाएको छु । केही महिनादेखि हाम्रो गाँउमा स्थानीय प्रहरीचौकी ईलाका प्रहरी कार्यालय मंगलटार र हामी युवाबिच मैत्रीपुर्ण फुटवल खेल आयोजना गरियो । त्यसमा हामीबिच सौहार्द वातावरण भयो ।
0 युवाले किन अवसर पाउनु पर्छ ?
हरेक देशको विकास र समृद्धिका लागि युवा शक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । देशको विकास प्रक्रियामा युवाले सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । उमेर र उनीहरुले गर्ने कामका आधारमा हेर्दा युवा उमेर जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण समय हो । युवा शक्तिलाई राष्ट्रका मेरुदण्ड र परिवर्तनका संवाहक पनि भनिन्छ । त्यसैले युवाशक्ति देशको महत्वपूर्ण सम्पत्ति मानिन्छ । तर अन्य विकासोन्मुख देशमा जस्तै नेपालमा पनि युवाहरुको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।
सरकारी तथ्यांक मान्दा हाल दैनिक सरदर १ हजार ५ सयको संख्यामा नेपाली युवा औपचारिक माध्यमबाट विदेश जाने गरेका छन् । भारतलगायत अन्य मुलुकमा अनौपचारिक ढंगले जाने गरेका युवाको संख्या पनि ठूलो छ। एकातिर यसरी रोजगारीको खोजीमा ठूलो मात्रामा श्रमशक्तिको पलायन भएको छ भने अर्कोतर्फ श्रमशक्तिकै अभावमा हाम्रो गाँउघरका खेतबारी बाँझो बन्दै गएका छन् । साथै विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस पाउन गाह्रो भइरहेको छ । गाउँघरमा युवा भेटिँदैनन् । केटाकेटी र उमेर पुगेका बूढापाकामात्र छन् । सँगसँगै यसबाट परेको सामाजिक क्षति अझै ठूलो छ । यसको लेखाजोखा गर्ने बेला आइसकेको छ । त्यसमा सबैले सोच्ने बेला आएको छ ।
0 कस्ता युवाहरु विदेशमा गएका छन् ?
शिक्षित, अशिक्षित, अर्ध्शिक्षित, सिप सिकेका, नसिकेका जो कोहीको पनि रोजाईमा विदेश नै पर्ने गरेको छ । देशका अधिकांश श्रमिक वयस्कहरुको सपना खाडी मुलुक हुने गरेको छ । शिक्षित युवाहरु पनि राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झटलागायतका समस्या देखाउँदै विदेश जाने गरेका छन ्। हामीले आफ्नै देशमा सुन्दर भविष्यको सपना देखाउन सकेका छैनाँै । देश बनाउनका लागि हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्ने जागरण सिर्जना गर्न सकिएको छैन। ।
रेमिटेन्सले बढाएको विलासिताले मानिसलाई विदेश जाने रहर जगाएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरेको छ तर त्यो बेरोजागारी समस्याको दीर्घकालीन समाधान वा दिगो आम्दानी होइन । त्यसरी आएको पैसालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । त्यो स्रोतबाट आएको धेरैजसो पैसा दैनिक उपभोग्य सामानको खरिदमा गइरहेको छ । यदि यसैगरी रोजगारीका लागि विदेसिनेको संख्या कम गर्न देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकेनौं भने यो बालक, वृद्ध र अशक्तको मात्र बसोबास भएको देश हुने निश्चित छ । यदि त्यसो भएमा हाम्रो देश विकास समृद्धिको दिशामा कहिल्यै उन्मुख हुन सक्दैन।
त्यसैले देशको दिगो विकासका लागि युवा शक्तिलाई क्षणिक फाइदाका लागि विदेश पठाउनुभन्दा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक छ। उत्पादन शक्तिको विदेश पलायनले देशको समग्र उत्पादन क्षेत्रमा परेको असर एकातिर छ भने यसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा सिर्जना गरेको सामाजिक समस्या झनै विकराल छ। त्यतातर्फ पनि समयमै ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ। सरकारले युवाहरुलाई उद्यमी र स्वरोजगार बनाउन सञ्चालन गरेको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम र गरीबी निवारणलगायतका कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
0 कृषिमा युवालाई लगाउन सकिदैन ?
आर्थिक उत्पादनको मुख्य क्षेत्रका रूपमा रहेको कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन नसकेका कारण कृषि पेशामा लागेका मानिसको आम्दानी बढ्न सकेको छैन । यसले नयाँ पुस्तालाई कृषिमा आकर्षित गर्न गाह्रो छ । उत्पादन गरेका सामग्रीको मूल्य निर्धारण र बजारीकरणमा समस्या छ। कृषिबाहेकका अन्य पेशामा लाग्नेका लागि पनि सिप, क्षमता, बीउ पुँजीको अभाव छ । अझ सरकारी निकायसँगको प्रकिया झनै झन्झटिलो छ । जसले देशमै बसेर केही गरौं भन्नेहरुलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन ।
यी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि उत्पादन तथा निर्माण अभियान आजको आवश्यकता हो । यो अभियान सञ्चालन गर्ने सशक्त माध्यम सहकारी हो। उत्पादनशील रोजगारीको सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धि, गरिवी निवारणका लागि एउटा ठूलो र सशक्त अभियानको संचालन सहकारीका माध्यमबाट गर्र्न सकिन्छ । सहकारीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । युवा सशक्तीकरणका लागि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, साँस्कृतिकरूपमा अवसर दिन सक्छ। देशको विकास र परिवर्तनको सम्बाहक युवा शक्तिलाई आफ्नै देशको माटोमा पसिना बगाउन पाउने अवसर दिन सक्छ ।
व्यापार व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा लाग्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने, सिपमूलक तालिम व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगारीका लागि ऋण दिने होइन देशभित्रै बसेर उत्पादन अभियानमा लाग्न बीउ पुँजीका लागि सहयोग गर्नुपर्छ ।
0 अन्त्यमा पत्रिका मार्फत ?
म रोशी भेगका सबै युवाहरुलाई समेटेर यहाँको सामाजिक काम गर्ने जानकारी दिन चाहन्छु । त्यस्तै यो देश हाक्ने युवाहरुलेनै हो भन्न चाहन्छु । हामी युवा मिलेर बिपी राजमार्गको सफाइमा प्रहरी र स्थानीय सरकारलाई सहयोग गरेका थियौ । आमामी दिनमा समेत युवाहरुको सामाजिक काममा सहभागिता रहनेछ । आजको खबर चौतारी साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।